यूरोपमा हनीमून गन्तव्यहरू भन्दा यस ठाउँमा प्रेममा बस्ने राम्रो ठाउँ अरू छैन.
Positano दक्षिणी इटाली गरेको अमाल्फी तट मा एक Cliffside गाउँ हो. नेप्च्युन द्वारा सिर्जना गरिएको लिजेन्ड अनुसार, समुद्रका परमेश्वर जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो प्रेम अप्सराको लागि. यसको कंकड Beachfront र ठाडो, साँघुरो सडकमा संग लहरै पसलहरूमा र क्याफेहरू के यसको लागि प्रसिद्ध छ. तपाईं र तपाईंको पति भ्रमण गर्नुपर्छ Chiesa di स्यान्टाम्यारिया Assunta को भर्जिन मरियम को एक 13 शताब्दीका Byzantine प्रतिमा सुविधा.
जस्तै एक सपना मा कदम, Positano प्रेममा रहेको मनाउन सही ठाउँमा छ! त्यहाँ त्यसो गर्न धेरै; तपाईं एक छ यकीन हुनुहुन्छ एक जीवनकालमा को यात्रा.
जब यो तपाईको उत्तम हनीमून गन्तव्यहरू युरोपमा फेला पार्न आउँदछ, हभार, क्रोएशिया जोडे सूची मा अक्सर छ! प्राकृतिक सौन्दर्य गोहि-गिर, पुरानो पर्खाल शहरहरु, र एड्रियाटिकको अन्त्य नीलो: क्रोएशिया छोटो दूरीको हनीमून वा रोमान्टिक मिनी ब्रेक को लागी एक अद्भुत विकल्प हो. सूर्य प्रशस्त साथ, दाखबारी, र रेस्टुरेन्ट विकल्पहरू, तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ जब तपाईं यस आश्चर्यजनक गन्तव्यमा यूरोपमा हनीमून.
यो सानो पर्खाल शहर गोथिक वास्तुकला को पूर्ण को लागी एकदम फिट छ जोडीहरु आराम र वाइब्स को लागी खोजिरहेका दिनको एक सानो इतिहास र दर्शनीय स्थलहरूको साथ. जलयात्रा मा क्रोएशिया हेर्न सामान्य-र सामना गरौं उत्तम तरिका को एक हुँदा, alsoagreat way to arrive onaसुहागरातयो महिनाको --एज, Uber आधिकारिक क्षेत्रमा उतरा छ, तर निश्चित छैन मार्गमा लाग्छ सक्छ.
स्विट्जरल्याण्ड might not be the first place to come to mind when you think of Honeymoon Destinations In Europe, तर यो निश्चित छ विचार लायक. सबैभन्दा युरोपेली देशहरूमा हुनत आकार सापेक्षिक मा सानो, स्विट्जरल्याण्ड उत्कृष्ट प्राकृतिक दृश्यहरु possesses. सुरम्य गाउँमा, परिष्कृत शहर, धनी सांस्कृतिक सम्पदा, र तपाईको हनीमूनको लागि आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि जुन तपाइँ जाडोमा हेर्नुहुन्छ, वसन्त, गर्मी, वा गिर.
इटाली गरेको राजधानी newlywed जोडे लागि आनन्द छ. यो भन्दा युरोप मा हनीमून स्थल सूचीमा भ्रमण को छ, यसलाई विवाहित जीवनको पहिलो केही दिन रमाइलो गर्न सिद्ध छ. यसका cobbled सडकमा र स्थलहरू गर्न संग्रहालयहरु, थिएटर, र रोमान्टिक रेस्टुरेन्ट, तपाईं सँगै रमाइलो गर्न अनन्त अनुभव गर्नेछन्.
तपाईं रोमन amphitheaters भ्रमण पर्छ! तिनीहरूले विस्तार गर्न आफ्नो महानताका र ध्यान को लागि दुनिया भर जानिन्छ. खाली थिएटर देखें एक दृष्टि हो. जब यो उत्कृष्ट ओपेरा कलाकारहरूको प्रदर्शनसँग प्रतिध्वनि शुरू हुन्छ, अनुभव वर्णन गर्न कठिन छ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#सुहागरात #रोमान्स europetravel रोमान्टिडेस्टिनेसनहरू